Madaxweynaha la doortay oo booqday xarunta Villa Soomaaliya kahor caleema saarka | Baydhabo Online
Madaxweynaha la doortay oo booqday xarunta Villa Soomaaliya kahor caleema saarka
Madaxweynaha la doortay ee J.F.S Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqdey xarunta madaxtooyada, halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha cusub, ayaa kulan la qaatay Madaxweynihii hore Mudane Xasan Sheekh, waxa uu uga mahadceliyey boqoashadiisii ugu horreysay ee Madaxtooyada uu ku yimaado ka hor calaama-saarka Madaxweynaha.
Si guud ayey uga hadleen labada mas’uul marxaladihii adkaa ee uu dalka soo maray iyo horumarradii laga sameeyey dowladnimada afartii sanno ee uu xalka hayey Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay mahad u hayaan Mudane Xasan Sheekh.
Kulanaka ayaa waxaa kaloo ay ka wada hadleen qaban-qaaban munaasabadda Caleema-saarka iyo xiliga ay dhici doonto, waxaana Madaxweynaha la doortay uu u mahadceliyey maamulka madaxtooyada muddadii ay soo shaqeeyeen iyo waxyaabaha ay dalka u qabteen.